၀ က်ဘ်စစ်ထုတ်စက်များ - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌သင်၏ ဦး နှောက် - ညစ်ညမ်းသောစွဲစွဲမှုပြန်လည်ထူထောင်ရေး
ဝက်ဘ်စစ်ထုတ်ကိရိယာများသည်အဓိကစွဲစွဲလမ်းစေသောစွဲလမ်းမှုပြန်လည်ထူထောင်ရေးကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဲဒါကိုယုံချင်မှယုံမယ်ဆိုရင်အားနည်းချက်တစ်ခုမှာသင်ကညစ်ညမ်းရုပ်ကိုမကြည့်နိုင်ဘူးဆိုတာသိရတာအံ့သြစရာပါပဲ။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်၊ သင်သည်သင်၏ကွန်ပျူတာကိုယဉ်ပါးအောင်မလုပ်နိုင်လျှင်သွေးဆောင်မှုကာလ၌စဉ်ဆက်မပြတ်အတွင်းအငြင်းအခုံဖြစ်ပွားနေသည်။ သင်ကိုယ်တိုင်လွယ်ကူစွာပြုလုပ်ပါ။
အရာအားလုံးသည်ယနေ့ပတ်ဝန်းကျင်၏နေရာတိုင်းတွင်ရှိနေသည်။ ဖိုရမ်အဖွဲ့ဝင်တစ် ဦး ကရှင်းပြသည် -
ဤ PMO စီးပွားရေးသည်အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်မတူပါ။ အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်သင် 'ခလုတ်' ကိုသင်တွေ့နိုင်ပြီးခုခံနိုင်သည်။ မင်းကအရက်စွဲနေရင်မင်းကဘားကိုဖြတ်ပြီး 'ငါမဝင်ဘူး' လို့ပြောနိုင်တယ်။ ရလဒ်အနေနဲ့မင်းရဲ့စနစ်ထဲကိုအရက်မ ၀ င်ဘူး။
တရား ၀ င်ညစ်ညမ်းသောဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်ဖြစ်စေ၊ မကြည့်သည်ဖြစ်စေဓာတ်ပုံတစ်စုံတစ်ရာကိုတွေ့မြင်သော်လည်း (အလုပ်အတွက်လုံခြုံမှုရှိလျှင်) နူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်းရှိလျှင်၊ သင်သည် 'သောက်ခြင်း' ကိုစတင်ပြီးဖြစ်သည်။ လှုံ့ဆော်မှုရှိသောပုံရိပ်သည်သင့် ဦး နှောက်ထဲသို့ ၀ င်ရောက်လာသည်။ မိန်းမတစ်ယောက် ခင်ဗျားဟာမိန်းမတစ်ယောက်နဲ့တူတဲ့အရာတစ်ခုခုကြောင့်အမြင်အာရုံကိုနှိုးဆွပြီးပြီ။ မင်းကမိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ပြုံးနေတဲ့မျက်နှာနဲ့လက်မကွာဝေးတယ်။ ဒါပေမယ့်မင်းဒါကိုမရခဲ့ဘူး၊ တကယ်တော့မင်းကိုဘယ်သူ့ကိုမှဝင်မလာဘူး၊
သင်ဟာမိန်းမများနှင့်သင်ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်လုပ်နေသည်ဟုထင်ရန်သင်၏ပျော်ရွှင်မှုလမ်းကြောင်းကိုချိန်ညှိပြီးပြီ ဖြစ်၍ ထို့ကြောင့်အိမ်တွင်နေခြင်းကြောင့်ထွက်သွားမည့်အစားထိုတွင်နေရန်သင့်ကိုလှုံ့ဆော်ပေးသောတောက်ပသောစတုဂံပုံကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်သင်ဆုလာဘ်ရရှိသည်။ ဆုလာဘ်ကိုဖယ်ရှားရန်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းမှာရုပ်ပုံများကိုဖယ်ရှားခြင်းဖြစ်သည်။ ရုပ်ပုံတစ်ခုမြင်သည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်သင်၏ ဦး နှောက်ထဲသို့ဝင်ရောက်ခြင်းနှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများမှ၎င်းကိုမတားဆီးနိုင်ပါ။ သင်လုပ်နိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောအရာမှာရုပ်ပုံများကိုပထမနေရာ၌မရပ်ရန်ခြေလှမ်းများလှမ်းပါ။
စစ်မှန်တဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုကြည့်ရတာကောင်းတယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းကတကယ်ကိုရှိတာပဲ၊ ဆုကွင်းဆက်များမှန်ကန်သောစံကိုက်ညှိမှုဖြစ်ပျက်နေသည်။ လှပသောအမျိုးသမီးတစ် ဦး ၏ပြုံးနေသည့်မျက်နှာမျာကိုသင့်ကိုယ်ပိုင်မျက်လုံးမှရရှိရန်သင်အမှန်တကယ်သင်သည်တစ် ဦး ကိုတစ် ဦး ချဉ်းကပ်ပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိရန်လိုအပ်သည်။ ဒါကသင့်ရဲ့ ဦး နှောက်ကပေးရမယ့်ငွေကိုသိဖို့လိုတယ်။
Web ကိုစိစစ်မှုများ အားလုံးညစ်ညမ်းအကြောင်းအရာပိတ်ဆို့ရန်အသုံးပြုနိုင်ပြီးညစ်ညမ်းကိစ္စများနှင့်အတူရုန်းကန်လူတို့အဘို့တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သောနိုင်ပါတယ်။ (သင်တို့သည်လည်းရှေးခယျြနိုငျ အားလုံးပုံရိပ်တွေပိတ်ဆို့ အစပိုင်းတွင် willpower တစ်ခုတည်းကိုသာအားကိုးခြင်းသည်ပညာမဲ့ရာရောက်သည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် dopamine ပိုမိုလိုအပ်နေသော ဦး နှောက်သည်စိတ်ဖိစီးမှုခံနေရချိန်တွင်အရာရာကိုကျိုးကြောင်းညီညွတ်စေနိုင်သည်။ သင်အစာစားနေပါကသင်အကြိုက်ဆုံးအစာကိုမီးဖိုချောင်တွင်သိမ်းထားမည်လော။ (ဆဲလ်ဖုန်း၊ proxy ဆာဗာများစသဖြင့်ဤစာမျက်နှာအောက်ရှိအရာများကိုကြည့်ပါ။ )
Blog Post - k9 porn filter ကိုကျော်လွှားနှင့်အဘယ်ကြောင့်ဒီအကို restart အတွက်အလုပ်လုပ်တယ်တားဆီးဖို့ဘယ်လို။ ညစ်ညမ်းသောစစ်ထုတ်ခြင်းများ၏အရေးပါမှုနှင့်ညစ်ညမ်းစွဲသူများအတွက်မည်သို့တပ်ဆင်ရမည်၊ ၎င်းကိုကျော်လွှားနိုင်ခြင်းမရှိဘဲကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်ရန်မည်သို့ညွှန်ကြားချက်ရှိသင့်သည်ကိုကျွန်ုပ်ဘာကြောင့်ယုံကြည်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော့်ဇာတ်လမ်းကိုမျှဝေချင်ပါတယ်။
K9 အသုံးပြုသူများအနေဖြင့် comments:
“ ဒါကကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တာပါ၊ အဲဒါကမင်းကိုကူညီလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ အီးမေးလ်အကောင့်အသစ်တစ်ခုကိုဖွင့်ပြီးစာရွက်တစ်ရွက်ပေါ်ချရေးပါ။ K9 အတွက်မှတ်ပုံတင်ရန်သင်ဤအီးမေးလ်အကောင့်လိုအပ်ပါတယ်။ ထိုအခါသင်၏ K9 စကားဝှက်ကိုသင်အလွယ်တကူမှတ်မိနိုင်သောအရာတစ်ခုထားပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အချို့သောဆိုဒ်များသည် k9 ကိုအလိုအလျှောက်ပိတ်ဆို့ထားသောကြောင့်ဖြစ်သည် ဒီကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေကို k9 'အမြဲတမ်းခွင့်ပြု' ထားဖို့အရင်ထားထားတယ်။ နာမည်အနည်းငယ်ဖော်ပြခြင်း၊ ပြန်လည်ပေါင်းစည်းခြင်း၊ YBOP၊ youtube နှင့်အားကစားအချို့။ k9 ကိုလည်းစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နိုင်ပြီး၎င်းသည် peer-to-peer streaming ကိုခွင့်မပြုပါ။
သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များအားလုံးရှိပြီးနောက် k9 ကိုပိတ်ဆို့ရန်သင်အလိုမရှိသည့်အခါ K9 စကားဝှက်ကိုသင်ဘယ်တော့မှမမေ့နိုင်သောအရာသို့ပြန်ထားပါ။ သင်ထူထောင်ခဲ့သောအီးမေးလ်အကောင့်သစ်အတွက်အီးမေးလ်လိပ်စာနှင့်စက္ကူအပိုင်းအစတစ်ခုကိုလွှင့်ပစ်ပါ။ သင်ဤအရာကိုလုပ်ပါ၊ သင်၏လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုစနစ်တစ်ခုလုံးကိုပြန်လည်ထည့်သွင်းပြီးပြန်လည်တပ်ဆင်ရန်စိတ်ရှည်သည်းခံခြင်း မှလွဲ၍ ထို K9 စကားဝှက်ကိုသင်လုံးဝရယူရန်လုံးဝမဖြစ်နိုင်ပါ။ ”
K9 သည်ဗုံးဖြစ်သည်။ သင်၎င်းကိုရယူနိုင်သေးသော်လည်း ၀ က်ဘ်ဆိုက် Exception> Always Block K9> သို့ သွား၍ Google Image search ကို (Category Blocked ') အနေဖြင့်ပိတ်ထားသည့်နောက်စာသားကိုကူးထည့်ရန်အကြံပေးလိုပါသည်။ မွတ္စု: ၎င်းသည်ရံဖန်ရံခါပိတ်ဆို့ရန်ပျက်ကွက်ပါလိမ့်မည်၊ သို့သော်သင်၏ဘရောက်ဇာမှ 'ရှင်းလင်းသောလတ်တလောသမိုင်း' သည်၎င်းကိုပြန်လည်သတ်မှတ်ပြီး၎င်းကိုအပြည့်အဝပိတ်ဆို့ခြင်းလုပ်ဆောင်မှုသို့ပြန်ပို့ပါလိမ့်မည်။ (ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကာလအတွင်းကျွန်ုပ်သည် K9 ၏စွမ်းရည်များကိုစမ်းသပ်ပြီးကျွန်ုပ်၏ပြသနာများနှင့်လှည့်ကွက်များအားလုံးကိုပိတ်ဆို့ရန်ကြိုးစားသည်။ )
အလွန်ရှုပ်ထွေးသော password ကို (ဖိုင်တစ်ဖိုင်ထဲမှာချရေး) နဲ့အသစ်တခု gmail အကောင့်ဖန်တီးပါ။
K9 ၌ဤအသစ်ကတဦးတည်းမှသက်ဆိုင်ရာ e-mail လိပ်စာကိုပြောင်းလဲ။
ရှုပ်ထွေးတဦးတည်းဖို့ K9 password ကိုပြောင်းပါ။
K9 ကနေနှငျ့သငျ့ e-mail လိပ်စာကနေ logout ။
စကားဝှက်ဖိုင်ကိုဖျက်ပါ - သို့မဟုတ် K9 စကားဝှက်အတွက် Futureme.org ကိုသုံးပါ။
သင် porn မသုံးတော့ပါ။
ဒီမှာကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တာပါ။ (လအနည်းငယ်အလုပ်လုပ်ပြီး K9 နဲ့ကျရှုံးပြီးနောက်)
1 ။ ငါပိတ်ဆို့ တိုင်းအမျိုးအစား K9 ရှိပါတယ်။
2 ။ ငါရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များ, YouTube နဲ့သင်သည်အဘယ်သို့ရှိအပေါ်လုံခြုံရှာဖွေရေးပြဌာန်း။
3 ။ ငါပိတ်ဆို့ဖို့အဓိကသော့ချက်စကားလုံးများ၏ရှည်စာရင်းဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
၄။ ငါပိတ်ဆို့ခြင်းမခံချင်သော site နှစ်ခုကိုထပ်ထည့်ခဲ့သည်။
5 ။ ငါလိုအပ်သမျှသောဆိုဒ်များကိုဝင်ရောက်နိုင်လျှင်ကိုမြင်လျှင်, အင်တာနက်ကိုစစ်တယ်။
၆။ အမျိုးအစားများကိုပြန်သွားကာကျွန်ုပ်၏လေ့လာမှုများအတွက်လိုအပ်သောကြိုတင်မမြင်နိုင်သောဆိုက်များနှင့်ဆိုက်များကို ၀ င်ရောက်ခွင့်ပြုရန်နှစ်ခုသို့မဟုတ်သုံးခုသာကျွန်ုပ်ကိုပိတ်ဆို့ခဲ့သည်။ ဤအမျိုးအစားတစ်ခုမှာ“ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များ” ဖြစ်သည်။ ငါဂူဂဲလ်ကိုပိတ်ဆို့ထားရင်မင်းရဲ့ YouTube အကောင့်ကိုသုံးလို့မရဘူး၊ ပြီးတော့ငါအကောင့်ကိုအလုပ်လုပ်ချင်နေလို့ပါ။
7 ။ မည်သို့ပင်ဆိုစေရှာဖွေရေးအင်ဂျင်အသုံးမကျဖြစ်စေခြင်းငှါ, ငါပိတ်ဆို့ဖို့ website တစ်ခုအဖြစ် K9-SafeSearch ကို၏လိပ်စာဝင်ကြ၏။
၉။ GMail အကောင့်အသစ်တစ်ခုကိုဖွင့်ပြီး K9 နဲ့ချိတ်လိုက်တယ်။ ငါ GMail အတွက်စကားဝှက်နဲ့အသုံးပြုသူနာမည်လုပ်လိုက်တယ်။ အဲဒါတွေကိုကျွန်တော်မမှတ်မိနိုင်အောင်။ ယခုတွင်ငါသည် K9 သို့မဟုတ် GMail အတွက်စကားဝှက်များမရှိသလို၊ မည်သည့်နေရာ၌မှမည်သည့် user name ကိုမျှသိမ်းဆည်းထားခြင်းမရှိသောကြောင့်၎င်းတို့ကိုပြန်လည် ရယူ၍ မရပါ
ဤနည်း, ငါသည်ဤ GMail အကောင့်ကိုဝင်ရောက်မနိုင်နှင့် K9 ကြောင်းအကောင့်အတိအကျကဤအသစ်သော password များပို့ပေးသကဲ့သို့ငါ K9 access လုပ်နိုင်မဟုတ်။
Done ။ ဤသည်ငါ့ကိုအစဉ်အဆက်အကြှနျုပျ၏အရှည်ဆုံး Streak အောင်မြင်ရန်ကူညီပေးခဲ့သည်။
OpenDNS - ထိုယောက်ျားများနှင့်အတူအလွန်ရေပန်းစားသည်။ ဒီဟာကို“ Cold Turkey” နဲ့တွဲသုံးဖို့စဉ်းစားပါ။
အေးတူရကီ အခမဲ့ဗားရှင်းကို အသုံးပြု၍ ကွန်ရက်စာမျက်နှာများကိုခုနစ်ရက်အထိပိတ်ဆို့နိုင်သောကုန်ထုတ်စွမ်းအားအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ opendns သည်ပိတ်ဆို့ရန်ပြင်ဆင်ခြင်းများကိုကြည့်ရှုရန်နှင့်ပြောင်းရန်အလွန်လွယ်ကူကြောင်း၊ ကျွန်ုပ်သည် opendns ကိုသတ်မှတ်ထားပြီး porn နှင့် nudity sites များအားပိတ်ထားပြီး opendns သို့ဝင်ရောက်ခွင့်ကိုပိတ်ဆို့ရန် cold turkey ကိုသတ်မှတ်လိုက်သည်။ အအေးကြက်ဆင်ကိုငါးဒေါ်လာဖြင့်လည်းသင် ၀ ယ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်အချို့သောပရိုဂရမ်များကိုသင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်လည်ပတ်ခြင်းနှင့်တစ်လအထိပိတ်ဆို့ခြင်းတို့ကဲ့သို့သောအပိုအင်္ဂါရပ်များပေးသည်။ ငါအသေးစားရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုဟာထိုက်တန်တယ်လို့ထင်တယ်။ ဒါကြောင့်ငါလုပ်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ငါ (IRC (တစ်ယောက်ယောက်ကတွေးမိရင်အကြိုက်ဆုံး chat site) ကိုဖွင့်တာကိုပိတ်ပင်လိုက်တာပါ။ ဝက်ဘ်ဆိုက်က www.getcoldturkey.com/
ငါလည်းသုံးတယ် cloudacl ငါ့ဖုန်းပေါ်ရှိညစ်ညမ်းဝက်ဘ်ဆိုက်များအားလုံးကိုပိတ်ဆို့ရန်အတွက် opendns.com သို့ဝင်ရောက်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်၏ဖုန်းပေါ်ရှိ opendns ကိုအလွယ်တကူဝင်ရောက်နိုင်ပြီး၎င်းကိုပိတ်ဆို့နိုင်သည်။ ၎င်းသည်ကျည်ဆံဒဏ်ခံနိုင်မည်မဟုတ်သော်လည်း၎င်းအားဖြတ်သန်းရန်အတွက်အလွှာများစွာရှိခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ ၎င်းအားငါ mouse ခလုတ်နှစ်ချက်နှိပ်ရုံနှင့်ချက်ချင်းလက်ငင်းရခြင်းထက်ကျွန်ုပ်လုပ်ဆောင်နေသည်များကိုရပ်တန့်ရန်၊ porn မှဝင်ရောက်ခွင့်။
net ကတရုတ်ပြည်ရဲ့ဒီကနေ့ - တစ်ဦးအခမဲ့အစမ်းကာလရှိပါတယ်။
အကျွမ်းတဝင်က်ဘ်ဆိုက်များမှဝင်ရောက်ခွင့်ကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့ Host ကဖိုင်တွေကိုတည်းဖြတ်။
ကြိုးစား Web ကိုကုဒ်ဖြုတ် သို့မဟုတ်အခြားညွှန်ကြားချက်ကိုရှာ။ လူတစ်ဦးကဒီမှာမှားသွားတယ်ဘယ်မှာတစ်နေရာတည်းတဦးတည်းနှစ်ကြိမ်တစ်ဦးချင်းစီရဲ့ site ထဲဝငျဖို့ရှိပါတယ်ဖြစ်ပါသည်။ ထိထိရောက်ရောက်အများအပြားက်ဘ်ဆိုက်များအတွက် www နှင့်မပါဘဲအလုပ်လုပ်သောကွောငျ့တစျခုနှစ်ဦးစလုံး 127.0.0.1 www.___.com နှင့် 127.0.0.1 ___.com ဝင်သော www.____.com ပိတ်ဆို့ရန်။
ငါသည်သင်တို့၏ site ကိုခံစားနေပါတယ်! သင်၏ကွန်ပျူတာနှင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုတန်ပြန်ခြင်းကိုသာဖတ်ပါ။ OpenDNS ဖော်ပြခဲ့တဲ့အတွက်ငါအရမ်းဝမ်းသာခဲ့တယ်။ ငါအချို့ထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုပူဇော်နိုင်လျှင်:
ယနေ့ပြနာသည်မူလမူလကွန်ပျူတာထက်ကျော်လွန်သွားသည်။ ကွန်ယက်သည်အားနည်းချက်ဖြစ်လာသည်။ PC ပေါ်မှာ NET NANNY ကိုထည့်မယ်ဆိုရင်သင်ရရှိထားတဲ့ iPod Touch ဒါမှမဟုတ် iPad WIFI ကိုစစ်ထုတ်မှာမဟုတ်ဘူး။ သူတို့က PC ကို router ဆီတိုက်ရိုက်သွားတယ်။ ဒါကြောင့် OpenDNS ကို filtering အတွက် non-optional MINIMUM ဆိုတာမိဘတွေကိုပြောတာ။ အခြားတစ်ယောက် (အိမ်ထောင်ဖက်၊ သူငယ်ချင်း) မှာ ROUTER စကားဝှက်ရှိဖို့လိုတယ်။
OpenDNS ၏အားသာချက်တစ်ခုမှာ၎င်းသည် PC တွင် (Update Utility မှလွဲ၍) install လုပ်ခြင်းမဟုတ်သောကြောင့်၎င်းသည် PC ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုနှေးကွေးစေခြင်းသို့မဟုတ်အရာဝတ္ထုများကို ၀ မ်းသာအားရဖြစ်စေခြင်းမဟုတ်ပါ။
ဒါ့အပြင်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်သူများ 3g / 4g ဆဲလ်-system ကို devices များ (စသည်တို့ကို Kindle, iPad) ၏သူတို့ရဲ့အသုံးပြုမှုကို minimize သငျ့သညျ။ သူတို့ကသာ WIFI သာ devices တွေကိုအသုံးပြုသင့်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့နေအိမ်ကွန်ယက်ကိုဘေးကင်းလုံခြုံကြောင်းကိုလမ်းနှင့်မဆိုအများပြည်သူကွန်ရက်များ (Starbucks က, et al) လည်းဖြစ်ကောင်းအန္တရာယ်ကင်းဖြစ်ကြသည်။ အားလုံးလက်ခံဖြတ်ပိုင်းများတစ်ခုတာဝန်ခံမိတ်ဖက်ဖို့က e-ပို့ကြသည်ထိုနည်းတူ, မည်သည့် e-reader ကိုအကောင့်ဖွင့်လှစ်ပေးသင့်သည်။ က Kindle / Nook / iBooks Store မှာအခမဲ့ erotica အများကြီးရှိပါတယ်။
ယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့ K9 စကားဝှက်ကန့်သတ်ချက်အတွက်ဖြေရှင်းချက်
ကိုယ့်ကိုယ်ကို ၁၀ နှစ်အရွယ်လောက်ဆက်ဆံခဲ့ရတယ်။ ငါ P ကိုအနည်းငယ် keystrokes နှင့် mouse ကိုကလစ်ကွာကွာရှိသည်မဟုတ်နိုင်ဘူး။ ဟုတ်တယ်၊ တစ်စုံတစ်ယောက်ကသူတို့ကော်ဖီစားပွဲမှာထိုင်နေတဲ့စီးကရက်ဘူးတစ်လုံးရှိနေတုန်းအားလုံးဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့ကြိုးစားနေသလိုခံစားရတယ်၊ အဲဒါကိုမဖယ်ရှားနိုင်ဘူးလို့ခံစားခဲ့ရတယ်။
ငါ့ရဲ့အဖေ၊ ဟုတ်တယ်ငါ့အဖေရှိခဲ့တယ်၊ ငါ့ i-phone မှာအချို့သောအသုံးချပရိုဂရမ်များပေါ်တွင် pin pass code တစ်ခုထည့်သည်။ ထိုအခါငါ Safari browser ကို YOUTube ပိတ်ဆို့နှင့်အခြား browser များ download လုပ်ရန်ငါ့ကို ဦး ဆောင်လမ်းပြသော app ကိုစတိုးပိတ်ဆို့။ ယခုတွင်ငါသည်ငါ့ K-9 ဝဘ်ကာကွယ်မှုကိုကျွန်ုပ်၏ဖုန်းတွင်အသုံးပြုသည်။ (K-9 အားစီးပွားဖြစ်ရောင်းချနိုင်ခြင်းမရှိတော့ပါ)
ဒီလိုလုပ်ပြီးနောက်ဘယ်လောက်စိတ်ငြိမ်သက်မှုရတယ်ဆိုတာကျွန်မမသိခဲ့ဘူး။ ကျွန်ုပ်၏ i-phone သည်ကျွန်ုပ်ကိုကြိမ်ဖန်များစွာပြန်ဖြစ်စေခဲ့ပြီးယခုကျွန်ုပ်အပေါ်တွင်လုံးဝတန်ခိုးမရှိပါ။ အဲဒါကိုစမ်းသပ်ဖို့အတွက်ပဲကျွန်တော်သွားပြီး applications တွေကိုသော့ဖွင့်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်၊ အဲ့ဒါကကျွန်မကိုရွှင်လန်းမှုများစွာပေးပြီး“ ဟုတ်တယ် !!” လို့ကြွေးကြော်ခဲ့တယ်
နောက်တော့ K-9 ကိုငါ့ကိုယ်ပိုင်ကွန်ပျူတာပေါ်မှာထည့်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ဟုတ်ကဲ့၊ ခဏကြာအလုပ်လုပ်နေပေမယ့်အဲဒါကိုဖွင့်ဖို့အရမ်းလွယ်ကူပါတယ်။ ဒီတော့ငါဘာလုပ်ခဲ့လဲ ?? ငါအကောင့်ကိုအမေ့ရဲ့အီးမေးလ်လိပ်စာပြောင်းလိုက်ပြီးသူမကိုစကားဝှက်ထည့်လိုက်တယ်။
ငါ porn စွဲမှတဆင့်သွားခဲ့ပါသည်ကျွန်မရဲ့မိဘတွေမပြောခဲ့ပါဘူး။ အဲဒီအစားငါအစားငါလုပ်သောအလုပ်အပေါ်မှာပိုပြီးအာရုံစူးစိုက်နိုင်အောင်အားလုံးအချိန်ဖြုန်းဝက်ဘ်ဆိုက်များထွက်ပိတ်ဆို့ဖို့လိုချင်သူတို့ကိုသို့ပြောသည်။ သို့သော်ကျွန်မအဖေသိတယ်တဲ့ခံစားချက်ရှိသည်။
သငျသညျထိုကဲ့သို့သော recycle bin ကိုကပေးပို့ခြင်းနှင့် (ငါ mac ရှိသည်) က emptying အဖြစ်, စကားဝှက်မပါဘဲ uninstall လုပ်ဖို့ကြိုးစားရင်ငါ K-9 ကာကွယ်မှုအပေါ်ဖတျရှုခဲ့ရာကနေ, အားလုံးအွန်လိုင်း access ကိုပိတ်ထားပါလိမ့်မည်နှင့်သင့်ကွန်ပျူတာကိုထိခိုက်ပါလိမ့်မည် ။ ဒါကြောင့်ငါက uninstall လုပ်ဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မည်ကြောင်းလမ်းမရှိသောဖြစ်ပါတယ်။ အကြှနျုပျ၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့်ကျောင်းအလုပ်ကျနော်တို့မှာအများကြီးခံရလိမ့်မယ်။
အခြားအ K-9 အသုံးပြုသူများကို said:
ဒါကငါလုပ်ခဲ့တာငါမင်းကိုကူညီနိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ် အီးမေးလ်အကောင့်အသစ်တစ်ခုကိုဖွင့်ပြီးစာရွက်တစ်ရွက်ပေါ်ချရေးပါ။ K9 အတွက်မှတ်ပုံတင်ရန်သင်ဤအီးမေးလ်အကောင့်လိုအပ်ပါတယ်။ ထိုအခါသင်၏ K9 စကားဝှက်ကိုသင်အလွယ်တကူမှတ်မိနိုင်သောအရာတစ်ခုထားပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ K9 ဟာအလိုအလျှောက်ပိတ်ဆို့ထားသောဆိုဒ်အချို့ရှိနေလို့ပဲ။ ဒီကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေကိုအရင်ဆုံး k9 'အမြဲတမ်းခွင့်ပြု' ထားဖို့ထားထားတယ်။ အနည်းငယ်ဖော်ပြရန်, ပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေး, youtube ကနှင့်အချို့သောအားကစား။ သက်တူရွယ်တူများ streaming များခွင့်မပြုသည့် K9 ကိုလည်းစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ပါ။ သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များအားလုံးရှိပြီးနောက် k9 ကိုပိတ်ဆို့ရန်သင်အလိုမရှိသည့်အခါ K9 စကားဝှက်ကိုသင်ဘယ်တော့မှမမေ့နိုင်သောအရာသို့ပြန်ထားပါ။ သင်ထူထောင်ခဲ့သောအီးမေးလ်အကောင့်သစ်အတွက်အီးမေးလ်လိပ်စာနှင့်စက္ကူအပိုင်းအစတစ်ခုကိုလွှင့်ပစ်ပါ။ သင်ဤအရာကိုလုပ်ဆောင်ပြီးသည်နှင့်သင်၏လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုစနစ်တစ်ခုလုံးကိုပြန်လည်တပ်ဆင်ပြီးပြန်လည်တပ်ဆင်ရန်စိတ်မရှည်လျှင်၎င်းသည်လုံးဝ K9 စကားဝှက်ကိုပြန်လည်ရှာဖွေနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
သင်၏ K9 ကိုရှင်းပြရန်ကြိုးစားခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သင်၏ဆိုလိုရင်းကိုကျွန်ုပ်သိပါသည်။ ငါလည်းဒီအကြောင်းကိုစဉ်းစားမိပေမယ့် PMO ကိုရပ်တန့်လိုက်ခြင်းကငါ့ဘဝအတွက်အများကြီးပိုအရေးကြီးသည်မှာငါ K9 ရှိခြင်းအကြောင်းတစ်စုံတစ် ဦး ကိုရှင်းပြခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်အဲဒါကိုကျွန်တော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှင်းပြခဲ့တယ် ... ငါ porn ကိုကြည့်ချင်တာကိုရပ်တန့်ချင်တယ်၊ အဲဒါကအရမ်းခက်ခဲတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်တယ်၊ ဒါကြောင့်ငါ software ကို install လုပ်ခဲ့တယ်။ ငါ ED အကြောင်းကိုဘာမှဖော်ပြခဲ့ဘူး။ ငါဘာကြောင့် porn မကြည့်ချင်တာလဲလို့သူတို့မေးတယ်။ ငါကရုပ်ဆိုးသလိုခံစားရတယ်၊ အဲဒါမရှိရင်ငါအရမ်းပျော်နေတယ်၊ ​​ပြီးတော့စမ်းကြည့်စမ်းပါလို့တောင်ပြောလိုက်တယ်။ အဲဒါဟာသင့်အတွက်ဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခုလို့ထင်လား။ မြင်းသေကောင်ကိုအနိုင်ယူရန်မဟုတ်သော်လည်း K9 ကို install လုပ်ခြင်းသည်ဤလုပ်ငန်းစဉ် (သို့မဟုတ်အခြားညစ်ညမ်းသောပိတ်ဆို့ခြင်းဆော့ဝဲလ်) တွင် ပို၍ အရေးကြီးသောအဆင့်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။ အဲဒါမရှိရင်ငါ PMO ကိုရပ်တာငါ့အတွက်ဘယ်တော့မှဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာငါသိတယ်။ သွေးဆောင်မှုကအရမ်းများလွန်းတယ်
လွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်ကမှ“ ပထမဆုံးထွက်ပေါ်လာသော PMO” ဂျာနယ်နှင့် K-9 စကားဝှက်ကိုပြောင်းရန်ကျွန်ုပ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ဂျာနယ်၏ထိပ်ပိုင်းတွင်စာလုံးကြီးများဖြင့်ငါစွန့်လွှတ်လိုသည့်အကြောင်းရင်းများရှိသည်။ ညစ်ညမ်းမှု၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကုန်ခန်းခြင်း၊ ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများဖြစ်သော EDD၊ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း၊ မကြာခဏဆီးသွားခြင်း၊ ငါညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းသောပုံရိပ်များကြောင့်ငါဖျက်ဆီးခဲ့သည့်ရည်းစားဟောင်းဆက်ဆံရေးများ၊ ကျွန်ုပ်မှာရွေးချယ်စရာမရှိ။ K-1 အတွက်စကားဝှက်သို့ scroll မချမှီထိုအကြောင်းပြချက်အားလုံးကိုကြည့်ရှုရန်ကျွန်ုပ်မှရွေးချယ်စရာမရှိပါ။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တွင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာချို့ယွင်းမှုအချို့ရှိလျှင်၊ ကျွန်ုပ်၏ laptop တွင်မိဘ blocker ကိုသော့ဖွင့်ရန်ကြိုးစားပါ။
Open DNS နှင့် K9 အတွက်ဖိုရမ်အဖွဲ့ဝင်တစ် ဦး ၏အကြံပေးချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
သင်သည်သင်၏ PC ကိုတစ်ဦးညစ်ညမ်း filter ကိုဖြည့်စွက်ကြိုးစားခဲ့ဖူးသလား သင်ကတကယ်ထိရောက်ဖြစ်ဘို့တစ်စုံတစ်ဦးကိုမှစကားဝှက်ကိုပေးဖို့ရှိသည်, ဒါမှမဟုတ်ငါပြုသကဲ့သို့, ပစ်ပါလိမ့်မယ်။ အချို့သော filter များသငျသညျကိုမွငျခငျြတက်ဘ်ဆိုက်များကိုပိတ်ဆို့အဖြစ်သို့သော်ဤချဉ်းကပ်မှုနှင့်အတူသတိထားရလိမ့်မည်။
ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ, ငါသည်ပိတ်ဆို့ပုံမှန်အတိုင်း porn sites များနှင့်အတူ, OpenDNS ကိုသုံးပါနှင့်လည်းငါ၏အ Router က။ ငါနောက်ကျောကိုငါ့အဟောင်းအလေ့အထများကိုသွားချင်တယ်ဆိုရင်, ငါပထမဦးဆုံးအကြှနျုပျ၏ OpenDNS password ကို retrieve ရန်ရှိသည်လိမ့်မယ်။ ထိုအခါအကြှနျုပျသ settings ကို reset ဖို့ရှိသည်လိမ့်မယ်။ ထိုအခါအကြှနျုပျသ router ကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခြင်းနှင့်စက်ရုံက default ကို reset, တစ်နည်းနည်းနဲ့တစ်ဦးပြန်လည် install ပြုလုပ် CD ကိုတွေ့ပါ, တဖန်မှန်ကန်စွာပြန် router ကို configure ရန်ရှိသည်လိမ့်မယ်။
ဤအရာအားလုံးသည်လုပ်ရခက်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်လုပ်နေသည့်အရာကိုပြန်လည်အကဲဖြတ်ရန်ကျွန်ုပ်အားအချိန်ပေးမည်ဖြစ်ရာ၎င်းသည်အတားအဆီးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ငါ ထပ်မံ၍ သွားပြီးအထူးဖန်တီးထားသောအီးမေးလ်လိပ်စာကို သုံး၍ OpenDNS ကိုမှတ်ပုံတင်နိုင်သည်၊ ထို့နောက်အီးမေးလ်လိပ်စာအတွက်စကားဝှက်ကိုကျပန်းစာလုံးများပြောင်းနိုင်သည်။ ဒါမှမဟုတ်ငါ K-9 ထပ်ထည့်နိုင်ပြီးဒီသီးခြား PC မှာကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ site အချို့ကိုကြည့်လို့မရတော့ဘူး။ သို့သော်လည်းငါသည်အနည်းဆုံးငါ့အဘို့ထင်, ငါ့လက်ရှိကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုအဆင့်ကို OK ကိုဖြစ်ပါတယ်။ အလုပ်ဖြစ်ပုံရတယ်
နောက်တစ်ယောက်က Open DNS ကိုဒီလိုပုံစံချခဲ့တယ်။
ငါဒေါင်းလုပ်လုပ် ပြီးတော့ OpenDNS ကို blacklist ထဲထည့်လိုက်တယ်။ ဒါကြောင့်ငါ settings ကိုပြောင်းဖို့သွေးဆောင်ခံရရင်တစ်နာရီလောက်ကြာလိမ့်မယ်။
နောက်ထပ်ပျော်ရွှင် OpenDNS အသုံးပြုသူ:
ပြီးခဲ့သည့်ညကကျွန်ုပ်၏ကွန်ပျူတာအားလုံးတွင် OpenDNS သို့ပြောင်းခဲ့သည် (၎င်းကို router level ၌လုပ်ခဲ့သည်) OpenDNS သည်တစ်နှစ်လျှင်ဒေါ်လာ ၁၀ ဖြစ်ပြီးသင်စစ်ထုတ်ခြင်းကိုသတ်မှတ်နိုင်သည်။ ငါ porn / လိင်က်ဘ်ဆိုက်များအပေါငျးတို့သဖွင့်ကြောင့်အကြီးအလုပ်ဖြစ်တယ်။ ဆုတ်ယုတ်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိလာတယ်။ စလစ်စလစ်လာရင်အဲဒီမှာတစ်ခုခုရှိရမယ်။
Linux နဲ့ OpenDNS
* /5* * * * sed /i -etc/resolv.conf '/8.8.8.8/d သည်
root ရဲ့ crontab ရန်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ 8.8.8.8 ကို Opendns မဟုတ်တဲ့အခြား dns server နဲ့အစားထိုးပါ။ Opendns အိုင်ပီလိပ်စာများကိုဖိုင်ထဲထည့်ပြီးသားဖြစ်ရမည် (လိုအပ်ပါကအလိုအလျောက်ရေးနိုင်သောထိုစာကြောင်း၏ဗားရှင်းကိုကျွန်ုပ်လုပ်နိုင်သည်) မည်သူမဆို Linux ကိုသုံးနေသော်လည်း crontab ဘာကိုဆိုလိုသည်ကိုမသိလျှင်၎င်းသည်လုံးဝမလိုအပ်ပါ။ သို့သော်ကျွန်ုပ်ကဲ့သို့လူတစ် ဦး သည် system ကိုလှည့်ပတ်သွားသည်ကိုသိပြီး pc ကို root access ရှိပါကကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင် Opendns စစ်ထုတ်ခြင်းစနစ်ကို ၅ မိနစ်တစ်ကြိမ်တည်းဖြင့်ကိုယ်တိုင်ထိန်းချုပ်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိရှိရန်အသုံးဝင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ filtering မဟုတ်ဘဲ dns server များကိုထည့်ရန်ဖိုင်။
ကွန်ပြူတာအသုံးပြုသူတစ်ယောက်အနေဖြင့်၊ သင်ကြည့်ချင်သောမည်သည့် website ကိုမဆိုပိတ်ဆို့ရန် hosts file ကိုသင်တည်းဖြတ်နိုင်သည်။ ဒီနည်းလမ်းကအသုံးဝင်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကသတိတစ်ခုရနေတဲ့အချိန်မှာသွားရှာမယ်ဆိုရင် ဦး နှောက်ကိုသတိရှိရှိလေ့ကျင့်ပေးဖို့သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် ဦး နှောက်ကိုသုံးဖို့ခွင့်ပြုလို့ပါ။ ၀ ဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုမဖွင့်သည့်အခါ၎င်းသည်လမ်းပိတ်ဆို့ခြင်းကြောင့်မဟုတ်ဘဲပိတ်ဆို့ထားသောအကြောင်းအရာကိုကြည့်ရှုခြင်းမပြုရန်မိမိကိုယ်တိုင်၏သတိပေးချက်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် K9, OpenDNS အတွက်အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤနည်းလမ်းကို K9 နှင့်အခြားနည်းလမ်းများနှင့်တွဲသုံးနိုင်သည်။
ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုချက်ချင်းနှင့် browser အားလုံးတွင်ပိတ်လိမ့်မည်။ သင်ထပ်မံထည့်သွင်းရန်သို့မဟုတ်ကွန်ပျူတာတစ်လုံးသို့မဟုတ်စက်တစ်လုံးထက် ပို၍ ထည့်လိုပါကသင်ဖန်တီးထားသောအချက်အလက်များကိုစာသား / စကားလုံး / အခြားဖိုင်အဖြစ်သိမ်းဆည်းရန်လိုကောင်းလိုလိမ့်မည်။ Device အများစုတွင်သူတို့၏ hosts file ကို edit လုပ်နိုင်သည်။ သို့သော်နည်းစနစ်အနည်းငယ်ကွဲပြားသည်။
အဆိုပါ Locate ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင်ဖိုင်။
Windows XP / Vista /7C: \_ WINDOWS \_ system32 \_ drivers \_ etc
Windows ကို 2000 C: \_ WINNT \_ system32 \_ drivers \_ etc
နှင့် Windows 98 / ME ၌: C: \_ WINDOWS
အမည်ရှိဖိုင်တစ်ခုကိုရှာဖွေ ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင်။ Notepad နှင့်အတူကဖွင့်ပါ။
သငျသညျပိတ်ဆို့ဖို့လိုခငျြတစျခုစီက်ဘ်ဆိုက်, သင်ဖိုင်ကို၏အောက်ဆုံးနှစ်ခု entries တွေကိုထည့်ပါ။ များစွာသောသူတို့အား URL ကိုပုံစံများ၏တစ်ခုခုကနေ access ကိုခွင့်ပြုပါဦးမည်အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် www နှင့် www မပါဘဲတဦးတည်းနှင့်တသားတရိုက်ထည့်ပါ။ အဆိုပါလိုင်းများ Add: 127.0.0.1 www.SITE_YOU_WANT_TO_BLOCK.com နှင့် 127.0.0.1 SITE_YOU_WANT_TO_BLOCK.com။ entries တွေကိုတစ်ခုချင်းစီ pair တစုံအတွက်အစားထိုး SITE_YOU_WANT_TO_BLOCK သငျသညျပိတျဆို့ချင်သောအမှန်တကယ် URL ကိုအတူ။ 127.0.0.1 သင့်ရဲ့ localhost ၏လိပ်စာ, ဆိုလိုသည်မှာသင်အသုံးပြုနေသောကွန်ပျူတာဖြစ်ပါတယ်။
သငျသညျပိတ်ဆို့ဖို့လိုအသီးအသီးက်ဘ်ဆိုက်အဘို့အထပ်ခြေလှမ်း3။
ဖိုင်ကို Save နှင့်ပိတ်ပါ။ သငျသညျအဖြစ်သိမ်းဆည်းသေချာအောင်လုပ်ပါ ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင် မည်သည့်ဖိုင် extension မပါဘဲနှင့်မ hosts.txt။ သငျသညျကို select ဖို့ပေးတဲ့ dialog box ကိုအဖြစ် save အတွက်မီနူးချတစ်စက်သုံးစွဲဖို့ရှိစေခြင်းငှါ ဖိုင်များအားလုံး အစား စာသားမဖိုင်တွေ ယင်းမှပြောင်းလဲမှုများကို save နိုင်ဖြစ်ခြင်းမတိုင်မီ ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင် ဖိုင်ကို။ မည်သည့် device ကိုတွင်တ overwrite လုပ်ဖို့ခွင့်ပြုချက်ရှိသည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ် ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင် ဖိုင်ကို။ ဤသည်တိကျသောနှင့်တစ် operating system ဖြစ်ပါတယ်တစ်ခုချင်းစီ operating system အတွက်ထူးခြားသောညွှန်ကြားချက်ကိုရှာဖွေရန်လိုအပ်ပေမည်။ Windows တွင်, တဦးတည်းလက်ကို click နိုင်ပါတယ် ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင် ဖိုင်ကိုရွေးပါဂုဏ်သတ္တိများသည်ကိုဖတ်မှသာ box ကိုစစ်ဆေးခြင်း, ok ကို click uncheck လုပ်ပါ။ တစ်ခုမှာအမြဲတမ်းတစ်ခု update ကိုအတည်ပြုရန်နိုင်ပါတယ် ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင် ဖိုင်ပြန် file ကိုရယူသုံးခြင်းနှင့်အပိုဆောင်း entries တွေကိုပေါ်လာသောစစ်ဆေးနေရလိမ့်မည်။
MAC များအတွက်: အဆိုပါလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကို Windows ဆင်တူဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့သင်နေရာချထားရမယ် ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင် ဖိုင်ကို။ ဥပမာအားဖြင့်, ကြည့်ရှု http://decoding.wordpress.com/2009/04/06/how-to-edit-the-hosts-file-in-mac-os-x-leopard။ အဆိုပါမှတ်ချက်အသစ်များကိုရဲ့ MAC OS ကိုမျိုးကွဲအချို့အဘို့ညွှန်ကြားချက်ဆံ့။
ဒီရက်သတ္တပတ်များမအောင်မြင်ရန်ကြီးမားသောအကူအညီမှာ Firefox add-ons Leechblock (ထိုနေရာများကိုလုံးဝပိတ်ပင်ထားသောလျှို့ဝှက်နံပါတ် ၆၄) ပါသည့်ရှည်လျားသောစကားဝှက်ပါစကားဝှက်ပါ ၀ င်သည်။ ၊ မီးလျှံမြေခွေး ဦး စားပေးများနှင့်မည်သည့် add-ons များကိုမဆို disable / uninstall လုပ်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
ငါတစ်ခါတစ်ရံတွင် Firefox ၏အကြိုက်များကိုပြောင်းလဲရန်လိုအပ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်စကားဝှက်ကိုရေးခဲ့သည်။ သို့သော်၎င်းသည်အလွန်ရှည်လျားပြီး (လုံးဝကျပန်း) စာရိုက်ရန်ခက်ခဲသောကြောင့် filter ကိုကျော်လွှားရန်သည်းခံခြင်းမရှိပါ။ ဆော့ဗ်ဝဲတွင်တစ်ခုခုကိုရှောင်ကွင်းရန်အမြဲတမ်းအမြဲတမ်းရှိသောကြောင့် (ကျွန်ုပ်အမှန်တကယ်မှာ Leechblock ကိုကျော်လွှားရန်စုံတွဲတစ်တွဲကိုသိပြီးဖြစ်သည်) ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ PC မှညစ်ညမ်းသော filter များကိုအမြဲတမ်းရုန်းကန်ခဲ့ရသည်၊ သို့သော်ယခုတွင်ကျွန်ုပ်တွင် filter များအများအပြားရှိပြီး၎င်းတို့ကို disable လုပ်ရန်အချိန်ကုန်လွန်းသည်။ အားလုံး။ ပျင်းရိခြင်းသည်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုကိုကျော်လွှားနိုင်သည်။
အဆိုပါပြင်းထန်သောလီမိတက် Access ကိုဖြေရှင်းချက်
အခြေခံအားဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်၏ကွန်ပျူတာစွမ်းရည်ကိုအကန့်အသတ်နှင့်သာရှိသောမိဘ၏ထိန်းချုပ်မှုများကိုကျွန်ုပ်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ထားလိုက်သည်။ ငါအတတ်နိုင်ဆုံးအကောင်းဆုံးလုပ်ခဲ့တာကိုငါပြောမယ်။
ပဌမ, ငါသည်ငါ့ Windows7အတွက်အခြားအကောင့်ကို set up, ဒါကြောင့်ငါ admin ရဲ့ရှိသည်။ အကောင့်နှင့် Non-admin ရဲ့။ အကောင့်။ ငါ 'control panel' ထဲကိုဝင်သွားတယ်၊ အဲဒီနောက်ငါ့ရဲ့ admin account အကောင့်မှာရှိတဲ့မိဘရဲ့ထိန်းချုပ်မှုတွေက 'block programs' ကိုသွားပြီး internet browser အားလုံးနှင့်အခြားအွန်လိုင်းပရိုဂရမ်များ၏အသုံးပြုမှုကိုပိတ်ပင်လိုက်သည်။ အကြောင်းပြချက်အချို့ကြောင့်၎င်းသည်အင်တာနက်စူးစမ်းရှာဖွေသူအားပိတ်ဆို့ခြင်းကိုခွင့်မပြုပါ။ ဤသည်အဘယ်ကြောင့်ဤသည်ကိုငါနားမလည်, ဒါပေမယ့်သင်က IE အားလုံးအချိန်များတွင်အသုံးပြုရန်ခွင့်ပြုသင့်ကြောင်းအာမခံသည်! ဒါ…
ဒုတိယအချက်မှာ ငါ "fgegqethwedbcgwrthrthwefdcbvshqeth" ကဲ့သို့သောအနတ္တတစည်းကိုသာရိုက်နှိပ်ခြင်းနှင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအီးမေးလ်ပို့ခြင်းအားဖြင့်စကားဝှက်တစ်ခုဖွင့်ခဲ့သည်။ အခြေခံအားဖြင့်တော့ငါမှတ်မိမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိထားတဲ့စကားဝှက်တစ်ခုပါ။ ကျွန်ုပ်ဖန်တီးထားသောစကားဝှက်ကိုကူးယူခြင်းနှင့်ကူးထည့်ခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်၏ admin account အတွက်စကားဝှက်တစ်ခုသတ်မှတ်လိုက်သည်။ ထို့နောက်ကျွန်ုပ်သည် admin-non အကောင့်ရှိ Internet explorer သို့သွားပြီး tools> internet options> content ကိုသွားခြင်းအားဖြင့် "အကြောင်းအရာအကြံပေးသူ" တစ်ခုကိုတည်ထောင်လိုက်သည်။
သင်သည်အကြောင်းအရာအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်တွင်စကားဝှက်တစ်ခုထည့်ရန်လိုအပ်သည်၊ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်၏အီးမေးလ်ထဲ ၀ င ်၍ စကားဝှက်ကိုကူးယူခြင်းနှင့်ကူးယူခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်သည် admin အကောင့်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သည့်တူညီသောနည်းလမ်းကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ငါဘယ်လိုအတိအကျမသိရသေးပေမယ့်ငါကကြိုတင်ခွင့်ပြုထားတဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်ဒ်တွေဆီကိုသာ ၀ င်ရောက်နိုင်ဖို့အတွက်ငါလုပ်ခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့်ငါသိတဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်တွေစာရင်းကိုအစပျိုးလိုက်တာမဟုတ်ဘူး။ Yhey မှာငါ့ရဲ့အီးမေးလ်၊ reuniting.info၊ သတင်း / ထင်မြင်ချက် ၀ ဘ်ဆိုဒ်အချို့နှင့်ပါ ၀ င်သည်။ (ကံမကောင်းတာကတော့ငါက drudgereport ကိုစွန့်လွှတ်ရတယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကတခြားသတင်းဆိုက်များနဲ့ချိတ်ဆက်ရုံပဲ။ ငါထို့နောက်စကားဝှက်အကြောင်းအရာအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်ထဲကနေ။
အတည်ပြုပြီးသောဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုလှည့်ပတ်ကြည့်ရှုရန်အရေးကြီးသည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သင်သည်အသစ်သောဆိုဒ်များကိုကြည့်ရှုရန်အလွန်တင်းကြပ်ကြောင်းသင်တွေ့ရှိသောကြောင့်အီးမေးလ်ကိုစစ်ဆေးခြင်းသို့မဟုတ်ဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုသို့ login လုပ်ခြင်းကဲ့သို့သောရိုးရှင်းသောအရာတစ်ခုခုကိုလုပ်ရန်စကားဝှက်ကိုအကြိမ်ကြိမ်ပြန်လည်ထည့်သွင်းရန်လိုအပ်သည်။ သင်စကားဝှက်ကိုရိုက်ထည့်ပြီး၊ “ ဒီကွန်ရက်စာမျက်နှာကိုကြည့်ရှုရန်အမြဲတမ်းခွင့်ပြုပါ” ကိုရွေးချယ်ပြီးသင်ပုံမှန်လုပ်လေ့ရှိသည့်အရာအားလုံးကိုသင်လုပ်နိုင်သည်ကိုရွေးချယ်ပါကသင်အဆင်ပြေပါသည်။ သို့သော်သင်လှည့်လည်ကြည့်ရှုပြီးစကားဝှက်ကိုမဖယ်ရှားမီသာမန်အရာများကိုလုပ်ရန်စကားဝှက်များကိုထပ်မံထည့်ရန်မလိုအပ်ပါစေနှင့်။
တတိယအချက် ကျွန်တော့်အတွက်လုံခြုံစိတ်ချရသောစကားဝှက်ကိုတစ်ယောက်ယောက်ကတွေ့ရှိခဲ့တာကြောင့်လအနည်းငယ်ကြာပြီးနောက်မှာအင်တာနက်လွတ်လပ်ခွင့်ကိုအပြည့်အဝပြန်ရနိုင်တော့မည် ထို့နောက်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ admin အားမ ၀ င်ရောက်နိုင်ရန်အတွက် password ၏သဲလွန်စများအားလုံးကိုဖျက်ပစ်လိုက်သည်။ သေးငယ်တဲ့လက်တဆုပ်စာမှတပါးမည်သည့် ၀ ဘ်ဆိုဒ်များကိုမဆိုစာရင်းသွင်းနိုင်သည်။
အကယ်၍ သင်သည်“ မရှိသောအင်တာနက်” ဗျူဟာကိုကြိုးစားအသုံးပြုမည်ဆိုလျှင်အန္တရာယ်ရှိနေသေးသည်။ အကယ်၍ သင်၏အင်တာနက်ကိုလုံး ၀ ပယ်ဖျက်လိုက်လျှင်၊ အိမ်နီးချင်းတစ် ဦး မှလုံခြုံမှုမရှိသောကွန်ယက်တစ်ခုပေါ်လာလျှင်မည်သို့ဖြစ်မည်နည်း။ အဲဒီနောက်သင်ကသူတို့ကိုအင်တာနက်မှချွတ်ပြီးညစ်ပတ်သောလိင်ဗီဒီယိုများကိုကြည့်ရှုရန်သုံးနိုင်သည်ကိုသင်သိသည်။ သင်၏အလုပ်ကသင့်အီးမေးလ်ကိုမကြာခဏစစ်ဆေးရန်လိုအပ်လျှင်ကော။ ပြီးရင်မင်းလုပ်လို့မရဘူး။
သို့သော်ဤနည်းဗျူဟာဖြင့်သင်လုပ်နိုင်သည်၊ သင်သည်သင်၏အလုပ်အတွက်ဝက်ဘ်ဆိုက်ဒ်တစ်ခုသို့အများကြီးသွားရန်လိုအပ်လျှင်၊ အကယ်၍ သင်သည်စကားဝှက်ကိုပြန်ယူပြီးပြန်ဖျက်လိုက်လျှင်၎င်းကို 'အတည်ပြုထားသောဆိုဒ်များ' စာရင်းထဲသို့ထည့်နိုင်သည်။ သင် bit torrent မှတစ်ဆင့်လိင်ဗီဒီယိုများကူးယူလျှင်ကော။ သင်၏ bit torrent client ကိုသင်၏ခွင့်ပြုထားသောပရိုဂရမ်များစာရင်းထဲသို့သင်၏ admin ၏မိဘထိန်းချုပ်မှုများမှထည့်နိုင်သည်။ အကောင့်။ ပြီးတော့သင်က public library ကိုသွားပြီး bit torrent client အသစ်တစ်ခုကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲလိုက်ပြီးဖျက်လိုက်တဲ့ files တွေပြန်ယူလာပြီဆိုပါစို့ USB drive ထဲထည့်လိုက်ပြီးကွန်ပျူတာကိုသွင်းလိုက်စမ်းပါ။ ဒါကငါ့နည်းဗျူဟာနဲ့အလုပ်မလုပ်ပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ program တစ်ခု install လုပ်ဖို့မင်းမှာ admin ရှိရမယ် အခွင့်ထူးများ။
၎င်းသည်အနည်းငယ်ရှုပ်ထွေးသော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်သည်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအလေးမထားဘဲ porn ကိုကြည့်ရှုရန်အတွက်လမ်းမရှိသောကြောင့်ကျွန်ုပ်အတွက်နှစ်သိမ့်မှုလည်းဖြစ်စေသည်။ ဒါကအဓိပ္ပာယ်မရှိတဲ့အင်တာနက်ရှာဖွေရေးကိုလျှော့ချပြီးကျွန်တော်ကြိုက်တာတွေ၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတန်ဖိုးထားမှုနဲ့မာန်မာနတွေပြည့်ဝအောင်လုပ်ဖို့အချိန်ပေးတယ်။
တစ်ဦးက Mac အတွက်အသုံးပြုသူကဆက်ပြောသည်:
ငါ Mac မှာရှိတဲ့မိဘထိန်းချုပ်မှုတွေကိုလုံးဝသုံးတယ်။ ငါမှာ admin နဲ့ Non-admin အကောင့်ရှိတယ်။ ကျွနု်ပ်တို့ရဲ့စွမ်းရည်ပြည့်ဝသောအလုပ်များနှင့်ပစ္စည်းများအား admin-non မဟုတ်သောအကောင့်သို့လွှဲပြောင်းလိုက်သည်။ ၎င်းသည်ဆိုးသောဆိုဒ်များနှင့်အရာအားလုံးကိုပိတ်ဆို့ထားသည်။ ဒါဟာတကယ်ကိုကောင်းတဲ့အရာပဲ၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအပိုပိတ်ပင်တားဆီးမှုကရှည်လျားတဲ့လမ်းကိုသွားစေတယ် သင့် ဦး နှောက်ကသင့်ကို admin ရဲ့ account ထဲကို ၀ င်ရောက်ဖို့နည်းလမ်းတွေကိုဆင်ခြင်တုံတရားရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်၊ ဒါပေမယ့်အနည်းဆုံးတော့စဉ်းစားဖို့ပိုလိုလိမ့်မယ်။
“ အင်တာနက်မရှိ” ဖြေရှင်းချက် - reboot လုပ်နေစဉ်အတွင်း overstimulation ကိုရှောင်ရှားရန်လူတစ်ယောက်၏ဖြေရှင်းချက်:
p / m / o ကိုငါတွန်းလှန်ခဲ့တဲ့အကြီးဆုံးလက်နက်ကကျပန်းစကားဝှက်ကိုကျွန်တော့်ကွန်ပျူတာထဲမှာထည့်ဖို့ပဲ။ ဒါကြောင့်ငါ porn ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တောင်ငါ့အိမ်မှာအင်တာနက်မသုံးနိုင်ဘူး။ ကျွန်ုပ်သည်အင်တာနက်ကိုအသုံးပြုနေဆဲဖြစ်သော်လည်းအများပြည်သူစာကြည့်တိုက်၌တစ်ရက်လျှင်တစ်နာရီသာရှိသည်။
မင်းမှာအင်တာနက်မရှိဘူးဆိုတာမင်းသိတဲ့အချိန်မှာမင်းကိုစိတ်အနှောင့်အယှက်မဖြစ်စေဘူး။ အင်တာနက်အသုံးပြုခြင်းသည်ဘီယာတစ်ပိုင့်ကိုအရက်တစ်အိုးထဲထည့်ခြင်းနှင့်တူသည်။ သူဘယ်လောက်ကြာကြာနေလိမ့်မယ်လို့မင်းထင်သလဲ အစပိုင်းမှာတော့စွမ်းအားကန့်သတ်ချက်ရှိပါတယ် သငျသညျစိတ်ဖိစီးမှုအောက်မှာ crack ဖွယ်ရှိသည်။ သင်ညစ်ညမ်းမှုမရှိလျှင်ကြာကြာသည် (သင်၏ ဦး နှောက်သည်ကျန်းမာလာသည်နှင့်အမျှ) သင်၏စွမ်းအားပိုမိုခိုင်မာလာသည်။
ညစ်ညမ်းရုပ်မြင်သံကြားမကြည့်ရှုရန်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်သည်အထိကျွန်ုပ်သည်အိမ်၌အင်တာနက်ကို ၀ င်ရောက်ခြင်းကိုငြင်းဆန်သည်။ စွဲလမ်းမှုသည်အားနည်းနေသဖြင့်ကျွန်ုပ်ကိုဖယ်ထုတ်ပစ်နိုင်သည်။ ဒီတံခါးခုံကိုရောက်ပြီဆိုလျှင်ငါ reformat CD ကို ၀ ယ်ပြီးကျွန်ုပ်၏ကွန်ပြူတာကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်မည်။ ငါက ၂ လလောက်ပဲရှိသေးတယ်၊ လေးလလောက်စောင့်မယ်လို့ငါထင်တယ်။
ကျွန်ုပ်၏အစီအစဉ်အပြည့်အစုံမှာကျွန်ုပ်အိမ်၌၎င်းကိုစတင်အသုံးပြုသည်နှင့်တစ်နေ့လျှင် ၁ နာရီအင်တာနက်ကိုကန့်သတ်ထားရန်ဖြစ်သည်။ သို့သော်အစပိုင်းတွင်ငါပြီးနောက်နှစ်ပတ်အကြာတွင်ငါစောင့်ဆိုင်းမည် ရှိ အမှန်တကယ်အသုံးပြု access ကို။ ငါသည်ငါ၏စိတ်ကိုငါအသုံးပြုရန်အင်တာနက်ရှိသည်နှင့်မရနိုင်သည်ကိုသိလို။